Ixesha lesiqingatha seSuper Bowl: Uphuphe ntoni uGary Grey ngoku?
January 21, 2022 0 3 imiz efundwayo
U-Pepsi ubambisene noF. Gary Gray we-LA's (Straight Outta Compton, ngoLwesihlanu, I-Fate of the Furious) ukwalathisa itreyila enika imbeko ifuthe lawo onke amagcisa amahlanu abenayo kwinkcubeko phambi komdlalo wabo omkhulu wePepsi Halftime Show. I-Call ibonakala njengefilimu ye-blockbuster ephezulu yamandla, ephefumlelwe malunga neminyaka engamashumi amabini exabisa iividiyo zomculo we-iconic kunye neengoma kunye nabenzi be-hitmakers abaziwayo besizukulwana sethu kunye ne-LA enebhongo, uDkt Dre, kwi-helm. Ilensi ihamba ngokukhawuleza phakathi kwe-Eminem, uSnoop Dogg, uMary J. Blige, kunye noKendrick Lamar bejonga uhambo lwabo lobugcisa kunye neempembelelo. Igcisa ngalinye lifumana umnxeba kumhlobo walo kunye nomdibanisi walo, uGqr. Dre, ukuba adibane kwiBala Lemidlalo i-SoFi e-Inglewood kwinto eya kuba yeyona inkulu i-Pepsi Super Bowl Halftime Show eyakha yakho.
Ukusuka kwiividiyo zomculo ezisezantsi ukuya kwifilimu yakudala yaseMzansi-Mbindi ngoLwesihlanu kunye ne-Epic ye-NWA biopic Straight Outta Compton, uF. Gary Gray ube yi-megaphone yenkcubeko kunye ne-hip hop amashumi eminyaka kwaye lelona lizwi lokwenyani lokubonisa uhambo oluvela ezitratweni. ye-LA ukuya kwibala le-SoFi kwinyanga ezayo. "Umnxeba" ufakwe ngumlawuli womculo onetalente yonke, otyunjwe nguEmmy kunye nombhali ophumelele ibhaso leGrammy uAdam Blackstone, oqulunqe iingoma ezinophawu "Rap God," "Isiqendu Esilandelayo," "Imicimbi yoSapho," "HUMBLE. ," "Sekunjalo DRE," kunye "nothando lwaseCalifornia."
"Ngalo lonke ixesha ndisebenzisana noDre, kubonakala ngathi kuphawula umzuzu obalulekileyo kwimbali yokuzonwabisa, ukusuka kwiiprojekthi ezifana noLwesihlanu, Ukuyibeka, iStraight Outta Compton, ngoku i-Pepsi Super Bowl LVI Halftime Show," yabelane noF. Gary Grey. “Njengomlandeli obalaseleyo, ndikugqala njengewonga kunye nenyhweba ukwakha ngokunyanisekileyo kwaye ndiyile lo mzuzu ngawona magcisa amahlanu adumileyo kwimbali yomculo. Bekumnandi kakhulu!”
U-Pepsi uyaqhubeka nokucinga kwakhona uMboniso we-Halftime
IPepsi Super Bowl Halftime Show yeyona nto ithethwa kakhulu ngomculo kunye nolonwabo, ngababukeli abangaphezu kwezigidi ezili-100 bebukele lo mboniso kwiminyaka yakutshanje. Ukwenziwa koMnxeba kuphawula into entsha yokuqala kwiPepsi njengoko uphawu luvelisa eyona mizuzu i-12 inika umdla kumculo ibe liphulo elikhulu leeveki ezininzi. Ukuqala namhlanje kwiYouTube kunye ne-Pepsi Super Bowl Halftime Show App entsha, iindawo ze-30 zesibini ze-Call ziya kudlala kwilizwe lonke kwi-NFL Divisional kunye neNkomfa yokudlala kunye nokukhokelela kwi-Super Bowl LVI, ukubeka iqonga lomboniso we-iconic.
“Ngoku ekubeni sisele kwiiveki nje ezimbalwa ukusuka kowona msebenzi ulindelweyo wePepsi Super Bowl Halftime Show ngalo lonke ixesha, sisondeza abalandeli kumlingo wento eya kuba ngumzuzu omkhulu kwimbali yenkcubeko yepop. Ngokujonga uluhlu lwethu lweetalente ezibalaseleyo ezintlanu, besifuna ukuhambisa amava e-cinematic anokunika imbeko ngokufanelekileyo igcisa ngalinye kwaye libhiyozele indima yalo emculweni nakwinkcubeko njengoko besihla eLos Angeles ukuya kudlala umdlalo weminyaka, ”utshilo uTodd Kaplan. , VP yeNtengiso – Pepsi. “Bekubalulekile ukuba silibalise eli bali ngendlela eyiyo, ke ngoko sibambisene nobukrelekrele bokuyila babo bobabini u-F. Gary Grey kunye no-Adam Blackstone ukuhambisa lo mxholo unefuthe. Itreyila iya kufumaneka kwi-app yethu ye-Pepsi Super Bowl Halftime Show kunye noluhlu lwasemva kwemifanekiso, iziphiwo zabalandeli, kunye nokunye okuninzi ukuqinisekisa ukuba abalandeli bayaqhubeka befumana umboniso kwiiveki ezizayo. "
Ngokuphehlelelwa koMnxeba, ukubulawa komxholo ongazange ubonwe ngaphambili usetelwe ukulahla kwiPepsi Super Bowl Halftime Show app kwiintsuku ezizayo kubandakanya:
• Ngasemva kwemifanekiso imifanekiso kunye neevidiyo ezivela ekwenziweni koMnxeba;
• Izipho ezitsha eziquka i-limited-edition ye-Super Bowl LVI ekhatywayo esayinwe nguGqr Dre;
• Iithontsi ezothusayo ezineseti yohlobo olunye lweseti yomdlalo onokuthi abalandeli baphumelele equka: I-Halftime Show license plate, glam set, calligraphy pen, kunye nebhodi yechess.
Oku ngakumbi: Marketing | ilayisenisi | Stadium | los Angeles
UMphathiswa wezoKhenketho eJamaica uza kuKhokela i-Global Mega Marketing Blitz Marketing|
Iresiphi yokuHamba: I-Pinch yeNkcubeko kunye ne-Splash yoBugcisa los Angeles|
I-Southwest Airlines ibophelela i-2 yeebhiliyoni zeedola kutyalo-mali kunye nendaleko Marketing|
Yintoni umahluko phakathi kweHemp oyile kunye neoyile ye-CBD
egqithileyo Unyango olutsha lweSicelo seChiza seNtuthuko eNgqongileyo
Okulandelayo Amatyala amatsha e-PTSD, ukudakumba kunye ne-Addiction enyukayo ukusukela kwi-Omicron